မဲခိုးမယ့် လက်သန်းတုတွေဆိုပြီးဖြန့်နေတဲ့သတင်းက တကယ်မှန်ရဲ့လား
မကြာမီကျင်းပမယ့် ၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ သတင်းတု၊ သတင်းအမှား ဖြန့်ဝေမှုတွေထဲမှာ ဒီရက်ပိုင်းထဲပျံ့နှံ့ခဲ့တဲ့ သတင်းအတုကတော့ ထူးခြားပါတယ်။
| 17 Aug 2020 3:38 PM GMT
ဒီသတင်းအတုက လက်ချောင်းပုံစံအတုတွေနဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို အသုံးပြုပြီး၊ ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာ မဲပေးဖို့လက်အတုတွေပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရေးသားဖြန့်ဝေမှုကို Ko Kan Aung ဆိုတဲ့ ဖေစ့်ဘွတ်အကောင့်ကနေ သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့ ည ၁၀ နာရီဝန်းကျင်မှာ ဖြန့်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဝင်းဇော် ဆိုတဲ့ နောက်ထပ်အကောင့်ကလည်း တစ်နာရီခန့်ခြားကာ ထပ်မံ ကူးယူဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုဖြန့်ဝေတဲ့အကြောင်းအရာမှာ အခုလိုရေးသားထားပါတယ်။ "ကဲ သတိ !! လက်ကိုအတုလုပ်ပြီး ကလိမ်ကကျစ်နဲ့ မဲခိုးဖို့ ကြံစည်နေပါတယ် မဲပေးတဲ့အခါ သေချာ စစ်ဆေးခြင်း ပြုကြပါ... !" ဆိုပြီး ရေးသားထားပါတယ်။ အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုထပ်ဆင့်ဖြန့်ဝေမှု တစ်ထောင့်ကိုးရာကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီရေးသားဖြန့်ဝေမှုတွေကို ဒီနေရာ၊ ဒီနေရာ နဲ့ ဒီနေရာ တွေမှာ ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
တကယ္ေတာ့ ဒီလက္သန္းၿပတ္ေတြရဲ႔ပံုက ၿပည္တြင္းကပံုေတြမဟုတ္သလိုေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြက္ ၿပင္ဆင္ထားတဲ့လက္သန္းေတြလည္းမဟုတ္ပါဘူး။တကယ္ေတာ့ ဒီီပံုေတြက နိုင္ငံၿခားသတင္းတစ္ခုက ပံုေတြကိုအသံုးၿပဳၿပီး ပံုဖ်က္ထားတဲ့သတင္းအၿဖစ္ဖန္တီးထားတာသာၿဖစ္ပါတယ္။
ဒီလုိ ပံုေဟာင္းေတြသံုးျပီး သတင္းတုေတြ ေရးသားျဖန္႔ဝေေနတာဟာ ခုမွမဟုတ္ပါဘူး။ ျပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း အိႏၵိယႏုိင္ငံမွာလုပ္တဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတုန္းကလည္း ဒီပံုေတြကုိသံုးျပီး သတင္းတုေတြ ဒီလုိပဲ ဖန္တီးျဖန္႔ေဝ ခဲ႔ၾကပါေသးတယ္။ ေရးသားျဖန္႔ေဝခဲ႔မႈကုိ ဒီေနရာ နဲ႔ ဒီေနရာ ေတြမွာ ၾကည္႔ရွဳ႕ႏုိင္ပါတယ္။
ဒီသတင်းကို BOOM က သတင်းဆန်းစစ်ချက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ရေးသားထားတဲ့ BOOM ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့ကလည်း ဖော်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။ BOOM ရဲ့ရေးသားဖော်ပြမှုကို ဒီနေရာ မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒီလက်သန်းအတုတွေရဲ့ပုံတွေဟာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကတည်းက သတင်းဟောင်းတစ်ခုကိုအခြေခံပြီးပြန်လည်ဖြန့်ဝေထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်းသတင်းက လက်သန်းဖြတ်ခံရတဲ့ ဂျပန်ယာကူဇာဂိုဏ်းသားတွေကို လက်သန်းအတုတွေဆက်ပြီးအကူအညီပေးတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။
Claim Review : ဓါတ်ပုံဟောင်းတွေအသုံးပြုကာ လက်ချောင်းအတုလုပ်ပြီးမဲခိုးဖို့ကြံစည်နေတယ်ဆိုပြီး လူမှုမီဒီယာတွေပေါ် ရေးသားဖြန့်ဝေနေမှုတွေကို BOOM က သတင်းဆန်းစစ်ချက်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
2019 polls 2020 polls Myanmar bogus votes elections fake finger fake votes featured fingers India Japanese poll Votes